I-Semalt inikeza izinzuzo eziphoqayo zeThuluzi lokuThola idatha
Njengezinye amasevisi we-web scraping , i-GitHub ithola ulwazi kusuka amawebhusayithi ahlukene ngendlela esheshayo nangempumelelo. Leli thuluzi ngokuyinhloko lishaya idatha kusuka ezithombeni futhi lenza isipiliyoni sakho sokuphequlula sibe mnandi.
Abaholi bebhizinisi bahlale belandelela ulwazi futhi bafuna ukuthi likhishwe kahle, ngaphandle kokuyekethisa kwikhwalithi. I-GitHub yilapho kuphela ithuluzi eliqoqa, elisha futhi londoloza idatha yakho kumafomethi afiselekayo. Ezinye zezinzuzo zayo ezihlukile zixoxwe ngezansi.
1. I-GitHub isiza ukuqoqa idatha enamandla
NgeGitHub, ungakwazi ukuqoqa nokuhlela idatha kuwebhu futhi ungayilanda ku-hard drive yakho ngqo. Kunenqwaba yezithombe namavidiyo aqukethe ulwazi oluwusizo. Ngezinsiza ezijwayelekile zokuqamba iwebhu, akunakwenzeka ukukhipha idatha kusuka kumadokhumenti e-PDF, amafayela we-JPG kanye ne-PNG. Kodwa-ke, i-GitHub yenza kube lula kuwe ukuthi uhlakaze ulwazi kusuka kumadokhumende we-PDF nakwezinye izinhlobo zamafayela. Ngamafuphi, i-GitHub izokusiza ukuthi uqonde ama dynamics ebhizinisi kangcono futhi uzovula amathuba amasha.
2. Thola idatha eqondile ne-GitHub:
Amathuluzi okudonsa kwedatha esiwasebenzisayo awutholi ulwazi olunembile nolweqiniso. Ngokungafani nezinsizakalo, i-GitHub iqoqa idatha ngokunembile futhi ihlaziye ikhwalithi yayo. Ngakho uma ufuna ukukhipha ulwazi kusuka kusayithi lomncintiswano, kufanele uzame i-GitHub. Leli thuluzi liqinisekisa imiphumela ephezulu futhi alinikeze okuqukethwe okuphindaphindiwe kubasebenzisi bayo.
3. I-GitHub igcina isikhathi sakho:
Isivinini lapho idatha iyatholakala khona kwenza umehluko. Nge-GitHub, ungahlola izithombe ezingama-20,000 nama-Word amadokhumenti emaminithini angu-50. Ngakho-ke, leli thuluzi lisindisa isikhathi sakho namandla kanye nezinqubo idatha ngejubane eliphezulu. I-GitHub ifaneleka ukuqala kanye nama-webmasters futhi ibasize ukuba benze umzila oningi kwi-intanethi.
4. Hlala ukuncintisana ne-GitHub:
Ukuhlanganisa amandla wedatha kubalulekile ekuguqulweni. Nge-GitHub, ungahlala uthanda ukuncintisana futhi ungathola ulwazi ezimakethe zamakethe zamanje. Leli thuluzi linikeza ulwazi mayelana nezindawo ze-e-commerce, izinkampani ze-FMCG, nezimakethe zemakethe, okwenze kube lula ngawe ukuthi unqume ukuthi umkhiqizo wakho ume kuphi. Izici zayo zokusika zisiza ukugqugquzela nokukhangisa umkhiqizo wakho ngendlela engcono.
5. Yonke idatha endaweni eyodwa:
NgeGitHub, ungathola idatha kumafomethi afisekayo. I-intanethi ikhiqiza ama-bytes ama-quintillion kolwazi njalo ngomzuzu. Leli thuluzi lizokusiza ukukhipha idatha kumasayithi omphakathi wezokuxhumana nezitolo zezindaba. Ungaphinda uhlose amabhulogi wezobuchwepheshe kanye namawebhusayithi okuthenga ukuze uthuthukise isayithi lakho. Awudingi ukubhekana nedatha engakhiwe noma engafani ngoba i-GitHub ihlela idatha yakho ngendlela efomethiwe efundekayo futhi ilondoloze isikhathi esiningi. Leli thuluzi lifanele amabhizinisi, amabhizinisi ase-inthanethi, ama-ejensi ezinkampani nezokuhamba.
Ubuhle bale isevisi yokuhlunga idatha yukuthi ikwazi ukwenza ngokwezifiso ngokugcwele futhi ifanelana nezidingo zakho ngendlela engcono. Nge-GitHub, ungakwazi ukulandelela amagama angukhiye abathintekayo bakho, ukhombise amakhasi akho wewebhu bese ususa ulwazi kusuka kokubili izixhumanisi zangaphakathi nangaphandle ngokunethezeka. Inamba enkulu yezinkampani ezithemba i-GitHub futhi isebenzisa leli thuluzi njalo Source .